नोवल कोरोना भाइरसको त्रास – धमाधम बन्द हुँदै तारे होटलहरु ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ८ चैत्र शनिबार १२:०९
नोवल कोरोना भाइरसको त्रास – धमाधम बन्द हुँदै तारे होटलहरु !
विश्वभरका एक सय ७० भन्दा बढी देशमा महामारीको रूपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरसको त्रासले नेपालका तारे होटल धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। गत मार्च १० बाट प्रभावित आठ देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसामा रोक लगाएको सरकारले शुक्रबार रातिदेखि लागू हुनेगरी आगमनमा गरेको थप कडाइले होटल सुनसान बन्दै आएका थिए। युरोपका सबै मुलुकहरू, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरू, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई अन्य जुनसुकै मुलुकबाट आउने सबै यात्रुलाई सरकारले शुक्रबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी १५ अप्रिल २०२० सम्म आगमनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले ठूला होटलले सेवा रद्द गर्ने क्रम बढेको हो। बिहीबार ९ गतेसम्मका लागि काठमाडौं बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सी बन्द भएको थियो भने शुक्रबारदेखि दरबारमार्गस्थितस्थित पाँचतारे होटल याक यन्ड यतीले सेवा बन्द गरेको छ।
होटलले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि शनिबारबाट आफ्ना कर्मचारीलाई घरमै बस्न निर्देशन गरेको छ। कोरोन संक्रमणको त्रासका कारण दुई साता अघिदेखि नै होटलको अकुपेन्सी घट्दै आए पनि मार्च १० देखि सरकारले पर्यटकलाई नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएसँगै होटलको अवस्था खस्किएको थियो। हाल होटलमा कुनै पाहुना नरहेको र होटल पूर्ण रूपमा खाली रहेको होटल सम्बद्व स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक आवतजावत, हिँडडुल नगर्न, सांस्कृतिक, सामाजिकस्थलमा भिड नगर्न, पार्टी प्यालेस, मठ–मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक तथा सार्वजनिकस्थलहरूमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन गरेको आग्रहसँगै होटल व्यापार खस्केको छ। होटलमै बस्न आएका पाहुनाका कारण पनि कोरोना फैलिने त्रास बढ्यो। त्यही भएर बन्द गर्नुको विकल्प भएन । हायात व्यवस्थापनले आफ्ना कर्मचारी तथा पाहुनाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै होटलबाट दिइने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको बताएको छ। कर्मचारीलाई बिदा दिइए पनि तलब सुविधाको बारेमा भने केही खुलाइएको छैन। उक्त होटलमा झन्डै चार सयको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन्। होटलको क्यासिनो केही समय पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थामा थियो।
अर्को तारे होटल सांग्रिलाले पनि ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई बिदा दिएको छ। होटलसम्बद्व एक अधिकारीले होटलअन्र्तगतको एउटा बार र एउटा बेकरी गरी दुई आउटलेट बन्द गरिसकेको जानकारी बताए। अहिले उक्त होटलका आठ कोठामा मात्र पाहुनाहरू रहेको र उनीहरूले पनि एक–दुई दिनभित्रै होटल छाड्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। होटलको सेवा कति अवधिलाई रोक्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय भइनसकेको भए पनि होटल व्यवस्थापनको छलफल जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । सो होटलमा दुई सय स्थायीसहित झन्डै दुई सय ५० कर्मचारी कार्यरत रहँदै आएका थिए। होटल संघ नेपाल (हान) ले होटलको अकुपेन्सी अनुसार सेवा दिन र चाहेको समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भन्दै कुनै पनि समय सेवा रद्द गर्न सक्ने अधिकार दिइसकेको छ। त्यसैगरी, कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण पोखराका चल्तीका होटल बन्द गर्न थालिएको छ। धेरै होटलले कर्मचारीलाई लामो छुट्टीमा घर पठाएका छन्। कतिपय व्यवसायीले भने आफूहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताएका छन्। पाहुना आउने सबैजसो नाका बन्द भएकाले पाहुनाविहीन अवस्थामा व्यवसाय धान्न मुस्किल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पोखरा प्रवेशको नाका चाउथेमा रहेको रोयल पाम रिसोर्ट पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। त्यस्तै, लेकसाइडको होटल पोखरा भिलेज प्रालि पनि बन्द गरेको सञ्चालकले बताएका छन्। रोयल पामका म्यानेजर राज श्रेष्ठका अनुसार ३१ डिलक्स कोठा रहेको होटल शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। ३५ जना कर्मचारीलाई बिदा गरेर चैत मसान्तसम्मका लागि होटल बन्द गरेको उनले बताए। होटल कुरुवाका रूपमा एक जना सुरक्षाकर्मीमात्र राखेको उनले बताए। ‘व्यवसाय सबै ठप्प भयो। पाहुना आउने नाका बन्द भइसके। आएका पाहुनाकै कारण पनि संक्रमण फैलिने त्रास भएकाले हामीले शुक्रबारदेखि होटल पूर्ण रूपमा बन्द गरेका हौं,’ उनले भने, ‘पाहुना आए पनि सेवा दिन सक्ने अवस्था रहेन। पाहुना आउन सक्ने अवस्था पनि छैन।’ उनका अनुसार रिसोर्टमा सात दिनसम्मका कार्यक्रम तालिका थियो। तर सरकारले भेला नहुन भनेको र संक्रमण बढ्दै गएकाले त्रसित हुनुपरेको उनले बताए। फागुनपछिका ६ वटा ठुला कार्यक्रम स्थगित भएको उनले बताए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
PREVIOUS Previous post: कोरोना जोखिम – बिरामी र चिकित्सक दुवै असुरक्षित, भनसुनपछि मात्र भर्ना
NEXT Next post: मनकामना दर्शन प्रालिले शनिबारदेखि केबुलकार सेवा बन्द गर्ने